FAKAFAKA: nihinana ny bemanaikiny! - ewa.mg
FAKAFAKA: nihinana ny bemanaikiny!
News - FAKAFAKA: nihinana ny bemanaikiny!
Mahavariana tanteraka ny mandinika
ny fahaizan’ny Malagasy nandrindra ny fiainany fahiny. Nampiasaina
avokoa rehefa lamina voajanahary. Iray amin’ireny ny bemanaiky.
Rehefa ilaina ny fankatoavana izay heverina fa mahasoa, omena ny
hasina sahaza azy ny bemanaiky, tsy nisy ny nitsivalam-pandry. Na
hazo na tany no nampiasana fahiny, efa bemanaiky avokoa ny
iantsoana ireo. Fa ny bemanaiky ankehitriny, tsy latsaka anaty
akory satria sarotra atelina kanefa faran’izay mandaitra sy
manan-kery amina sehatra maro. Anisan’ny mahita faisana amin’izany
ilay fanahy maha olona.
Vola, vola, vola… Izy io no nanjary
bemanaiky ho an’ny ankehitriny. Lafo ambongadiny ilay fanahy
mampiavaka ny olona amin’ny biby. Toa nanjary voasandan’ny vola
avokoa ny zava-drehetra. Tafiditra isan-tsehatra ity bemanaiky
niova endrika ity. Eny, voavidiny hatramin’ny feon’ny
fieritreretana. Tsy mahay mamantatra intsony ny tsara sy ny ratsy
ny olona. Mandrangaranga ny herin’ny vola ho fitaovana
hoenti-mandresy ny marina, ny rariny ary ny hitsiny.
Io vola nanjary bemanaiky io no
anisan’ny mahavery fanahy ny olona maro. Very fanahy ka sahy
mandatsaka aina. Very fanahy ka lasa miraviravy tanana manoloana ny
tsy mety. Very fanahy ka sahy manitsaka ny namana, ny havana, ny
mpiara-miasa, ny mpiraitampo, sns, eo an-tampon-doha… Very fanahy
ka hatahorana hivadika biby, sanatriavin’ny vava miteny!
Raha mbola io bemanaiky amin’ny
endriny vaovao io no mibahana sy omen-danja ao anatin’ny
fiarahamonina malagasy fa tsy ilay fanahy maha olona intsony, azo
inoana fa tsy ho lasa lavitra i Madagasikara. Ho potika tanteraka
ny maha Malagasy ny Malagasy (ny taniny, ny fombany, ny finoany, ny
kolontsainy, ny maha firenena azy, ny hareny…).
… Mahavariana fa na efa esoin’ny
vahiny amina karazana anarana sy teny hafahafa (firenena
moramorainy, firenena mpankatoa foana…) aza ny Malagasy sy i
Madagasikara, mbola tsy mahatsapa ihany fa mitady hivadika landemy
(anaran-kazo hoentina miteraka fahalemena) mihitsy ange
Ravola Bemanaiky e!
Na bemanaiky na landemy, hain’ny
Malagasy tsara ny mifanandrina amin’ireo. Noho izany, mila sy
mitafy fahalalana nananan’ny Malagasy fahiny ny ankehitriny vao
tafaverina amin’ny fanahy no maha olona. Fiverenana eny
L’article FAKAFAKA: nihinana ny bemanaikiny! a été récupéré chez Newsmada.
LA2M ANDROHIBE: Mizotra tsara ny asa fitiliana
Raha vao miresaka LA2M isika, dia fitiliana « PCR » avy hatrany no mby ao an-tsaina ao anatin’izao ady atrehantsika miaraka handresena ny « covid-19 » eto Madagasikara izao. Maro dia maro tokoa ankehitriny ireo singa (prelèvement) tonga eny an-toerana. Dingana maro no lalovana vao tonga amin’ireny valim-pitiliana henontsika amin’ny haino amam-jery ireny. Marihana moa fa raha tsy misy ny olana ara-teknika dia mahavita fitiliana singa 384 ao anatin’ny roa ora ity ivo-toerana ity raha araka ny nambaran’ny Tomponandraikitra izay miasa eny an-toerana. Maro lafy ireo mpiasan’ny fahasalamana izay miasa andro aman’alina eny an-toerana amin’izao hamehana ara-pahasalamana izao. Misaotra ary mankahery azy ireo isika. Sary vitsivitsy maneho ny asan’izy ireo. Malagasy mifanohana, mandresy ny « coronavirus ». L’article LA2M ANDROHIBE: Mizotra tsara ny asa fitiliana a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.
Hiara hientana isika hanafy ireo sahirana amin’ny Alarobia 21 Jona 2017. Ny tsirairay no mahita ny olona hanaovany azy. Fitafiana ihany no atao fa tsy sakafo na vola, toy ny lamba, kiraro, bodofotsy… “Tsy azo atao ny mandefa izany amin’ny haino aman-jery na hitonona ny anaranao amin’ilay olona na ny antony anaovanao izany”, hoy ny mpikarakara. Hetsika tsy anavahana olona na saranga na ireo efa mpanao izany ity hetsika iray ity. Natao izao hanampiana ny mpiray tanindrazana. Nirina R. HORONAN-TSARY Cet article TAFIO IZY FA AZA ANGORAHANA. est apparu en premier sur déliremadagascar.
Tsy dia ahitana fako mivangongo eraka ny arabe intsony eto an-drenivohitra tato anatin’ny herinandro vitsy izay. Mitohy ny fanesorana fako manerana ny tanàna ataon’ny orinasa Samva ho fanadiovana ny tanàna. Tao anatin’ny herinandro vitsivitsy izay, fiara miisa 13 no nifarimbona nanala ny fako teto Antananarivo ho famongorana ny fako. Tsy mijanona hatreo anefa izany fa mitohy ny ezaka mba hitsinjovana ny fahasalaman’ny vahoakan’Antananarivo, hoy ny tale jeneralin’ny Samva Rakotoarivony William, omaly. Izany hoe, nanampy fiara lehibe 12 ny Unicef hanampy ireo 13 efa am-perinasa ireo. “Manomboka androany hariva (omaly hariva) dia hiasa ao anatin’ny 10 andro ireo kamio lehibe ireo hamongorana ireo fako be manerana ny tanàna. Olona 8 isaka ny kamiao no hiasa hanala ny fako ka tafiditra ao anatin’io isa io ny mpamily. Tsy misy olana ny resaka solika hatreto fa mandeha tsara ny asa. Tokony hadio izany ny tanàna ao anatin’io 10 andro io”, hoy ny fanazavan’ny tale jeneraly, Rakotoarivony William. Fantatra ihany koa fa niha naloto ny tanàna nanomboka ny 1 janoary teo. Tafakatra 500 hatramin’ny 600 taonina isan’andro ny fako raofin’ny Samva, raha 270 hatramin’ny 300 taonina isan’andro teo aloha. Isan’ny maha betsaka ny fako amin’izao fotoana izao ny mbola fisian’ny litchi sy ny garaba, ny voankazo isan-karazany ary ny legioma, hoy hatrany ny tale jeneraly. Laurena Nany L’article Fanalana fako eto an-drenivohitra : Kamio 25 no ahetsika mandritra ny 10 andro est apparu en premier sur .L’article Fanalana fako eto an-drenivohitra : Kamio 25 no ahetsika mandritra ny 10 andro a été récupéré chez Triatra.
Hita tao anaty « camera de surveillance »: tratran’ny polisy ilay jiolahy mpamaky fiara
Noraisim-potsiny! Jiolahy malaza ratsy amin’ny famakiana fiara ity saron’ny polisy avy ao amin’ny boriborintany fahenina eny Ambohimanarina ity. Araka ny fanazavan’ny polisy, hita tao anaty “camera de surveillance” ny fihetsik’ity jiolahy mamaky fiara teny amin’ny faritra manodidina an’Ambohimanarina iny. Mody miantso amin’ny alalan’ny telefaonina finday izy raha ny fahitana azy tao anaty “camera” kanjo sady mitily ny fiara hovakiny sy ny entana ao anaty fiara. Nalain’ity jiolahy ity ny entana tao anaty fiara iray sendra nipetraka teo amoron-dalana. Tsy hitany akory anefa ny fisian’ny “camera de surveillance” mipetraka eo amin’ilay trano eo amin’ny manodidina ny toerana nanaovany ny asa ratsiny. Nanao vela-pandrika avy hatrany ny polisy taorian’izay ka tratra ity jiolahy ity. Nanda mafy izy nandritra ny famotorana nataon’ny polisy nefa tsy fantany fa efa nisy “camera” ilay trano. Ankoatra izany, nanao “casquette” izy tamin’ny hita tao anaty “camera”, saingy rehefa nosavaina ny tao an-tranony, hita tao ilay satroka nanaovany ny andron’izy hita tao anaty rakitsary mangalatra anaty fiara.Jean ClaudeL’article Hita tao anaty « camera de surveillance »: tratran’ny polisy ilay jiolahy mpamaky fiara a été récupéré chez Newsmada.